Address Myanmar: ငါ နင့်ကိုမြိုချလိုက်တယ် မိဝေ
ငါ နင့်ကိုမြိုချလိုက်တယ် မိဝေ
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး လမ်းထောင့်ကစံပယ်ပင်လေးကို လှမ်းကြည့်မိလိုက်တဲ့အခိုက် မင်းအငွေ့အသက်တွေက ငါ့အရှိုက်ကို လာ,လာခိုက်ဆဲ …. ။
ဒါ… ဘယ်ဘ၀က မိုက်ပြစ်ပါလဲ….မိဝေ ။
မျှော်လင့်ရခြင်းသစ်သီးတွေခမျာ ရိရွဲပုပ်အဲ့ရှာလို့…… ငါ့ မြိုသိပ်ရခြင်းတွေကို နင်မြင်နိုင်စေဖို့ အသက်ကို ခပ်ဖော့ဖော့ပဲရှူထားပါ့မယ် …. ။
မိဝေရေ…… လူလူချင်းချစ်တဲ့ အချစ်ကို ဘာကြောင့်များ ဂုဏ်ပကာသနတွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးတတ်ကြပါသလဲ (တကယ်ပါ) ဘေ့(စ်) မတူပဲ ပါဝါ ချင်းပေါင်းလို့ရအောင် ဗီးနပ်(စ်) ဆီမှာ သွားဆုတောင်းကြစို့လား ….. ။
ငါ….. တအားရင်နာတယ်….မိဝေ ။
ထားပါလေ…. ဆေးစက်ကျရာသာအရုပ်ထင်စတမ်းဆို ငါ နင့်ကို အရင်ဦးအောင် နမ်းခဲ့မှာပေါ့ အခုတော့ ဒီလမ်းက မှန်းထားတာထက် ကြမ်းခဲ့တယ် ။
နင့်အပြုံးကိုမမြင်ရရင် ငါ ဘယ်ရွှင်လန်းနိုင်ပါ့မလဲ ငါကြေကွဲတဲ့အခိုက်မှာသာ နင် ၀မ်းမနည်းနေမိဖို့ သေချာပေးပါ….မိဝေ ။
နင်ဟာ…. ငါ့ရဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းကငွေလမင်း ငါ့ရဲ့ ချစ်ရက်ရှည်ရှည်အင်းလျားမြေ ငါ့ရဲ့ ဂျပ်ဆင်ထိပ်ကလရိပ်ပြာ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ကမ္ဘာဟာ ဒီလောက်အထိပဲခမ်းနားနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း နင့်မိဘတွေကိုဖြောင်းဖြပေးပါ….မိဝေ ။
မိဝေရေ….. အချစ်စစ်တို့ရဲ့သမိုင်းမှာ မုန်တိုင်းကြမ်းတွေပါစမြဲပေါ့ ဒီတစ်ကျော့ လှိုင်းပုတ်ရင်သာ တို့အတူ နစ်မြုပ်လိုက်ကြရအောင်ပါ .... ။
ငါ….မဏိမေခလာကို မမျှော်ပါရစေနဲ့လား မိဝေ ။
ဒါနဲ့…. ကွေကွင်းရခြင်းတရားဟာ ရပ်ပြစ်ရှစ်ပါးထဲမှာ ပါ,ပါသလား နင်မရှိတော့တဲ့အခါ ငါ့ရှင်သန်ရာမြေကမ္ဘာ ရာသီဥတုတွေ ဖောက်ပြားလာရဲ့….၊
ငါ့မှာလည်း….. အယောင်ယောင်အမှားမှားနဲ့ရယ်ပါ…..မိဝေ ။
ဝေရေ….. ဝေလေးရေ…… မိဝေရေ………….. လွဲချော်မှုတွေအကြားမှာ တစ်စ,စနဲ့ လွတ်ကျမသွားဖို့ ငါနင့်ကို မြိုချထားပါရစေလားကွဲ့ ။
နင်နဲ့ပတ်သတ်လာရင် တရားလက်လွတ် ငှက်တောင်ကျွတ်ချင်မိတဲ့ ခပ်ကြောင်ကြောင်ငတိက ငါဆိုတဲ့ကောင်ပေါ့….။
သြော်…. သံသရာကိုဆွဲဆန့်လို့ ဘယ်လောက်ပင်ရှည်ရှည် တဲ့လား နင့်အပြုံးကိုမြင်ရတဲ့အခိုက် အဲဒီသီချင်းစာသားကို ငါအကြိုက်တတ်ဆုံးပါပဲ…..မိဝေ ။
မိဝေရေ….. လောကဓာတ်တစ်ခုလုံးကို နင့်အပြုံးမိုးတွေနဲ့ ပက်ဖြန်းထားလိုက်စမ်းပါ (ငါက) နင်ဆင်လိုတဲ့ ပန်းကို အနမ်းနဲ့ ခူးဆွတ်ခြွေမြန်းပေးမှာပေါ့ ရှူး…..တိုးတိုး သက်ပြင်းကို ခပ်ဖွဖွလေးပဲချ နားထဲမှာ…….. ပန်းတွေနဲ့ဝေ သီချင်းသံကြားနေရတယ် ……… ။ ။